EUR / CHF Archives - Funda ukurhweba
tag: YeEUR / CHF
I-EUR / CHF ifikelela kwi-Bearish Exhaustion, inokuthi ibuyele kwinqanaba le-1.0749
Ukuhlaziywa: 28 Julayi 2021
I-EUR / CHF yeXabiso lexesha elide iTrend: Bearish
Ukususela nge-5 kaMatshi, YeEUR / CHF Isibini siye saya ezantsi. Isibini semali siwile ukusuka kwinqanaba eliphezulu le-1.1100 ukuya kwi-1.0811. Ukusuka kwi-downtrend yakutshanje, intengiso ibonakala ifikelela kwi-bearish. Okwangoku, nge-14 kaJulayi edowntrend, umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwakhona kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini siza kuwa kodwa sihlehle kwinqanaba le-1.272 yenqanaba leFibonacci okanye inqanaba le-1.0749.
Isibini semali sikwinqanaba lama-38 le-Index ye-Relative Strength period 14. Oku kuthetha ukuba isibini esi sikummandla weentaba ongaphantsi kwaye sisembindini we-50. Intengiso isondela kwingingqi ethengiswe ngaphezulu. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijonge ezantsi zibonisa ukwehla.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini sihamba ecaleni. Ukusukela nge-8 kaJulayi, imakethi ibidibanisa phakathi kwamanqanaba e-1.0810 kunye ne-1.0860. Ixabiso lemali liphule uluhlu lwamaxabiso asezantsi. Esi sibini siwele kummandla ogqithisileyo wentengiso.
Isibini singaphezulu kohlobo lwama-25% lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ii-SMAs zijike ngokuthe tyaba zibonisa imeko esecaleni. Ukunyuka kuya kuqhubeka kwakhona ukuba amaxabiso aqhekeza ngaphezulu komgca wenkxaso yomgca othe tye.
I-EUR / CHF ifikelele kwi-bearish ukudinwa. Esi sibini sivavanya inqanaba le-1.0795 ukuze liqhubeke kwakhona phezulu. Ukuba inqanaba le-1.0795 lenkxaso liyayigcina iya kuthi ibonakalise ukuqala kwakhona kokuya phezulu. Nangona kunjalo, ngesixhobo seFibonacci, imakethi iya kubuya umva kwinqanaba le-1.272 yenqanaba leFibonacci okanye inqanaba le-1.0749.
I-EUR / CHF ifumana kwakhona i-Bullish Momentum, ibuye ibuye ngaphezulu kwenqanaba le-1.0804
YeEUR / CHF Isibini sihamba phantsi. Isibini semali sifikelele ekuphelelweni kwe-bearish njengoko amaxabiso ehle ngaphezulu kwenqanaba le-1.0812 kwaye yaqala kwakhona ukudityaniswa ngaphezulu kwenkxaso yangoku. Nge-13 kaJulayi, imeko ye-bearish yapheliswa njengoko intengiso yaqala kwakhona ukudityaniswa. Ukusuka kwintengo yamaxabiso, intengiso ifikelele kwi-2.618 yokwandiswa kweFibonacci. Izibane zeBullish zibonakalisa ukunyuka okuphezulu kwesibini.
Isibini semali sikwinqanaba lama-42 le-Index ye-Relative Strength period 14. Oku kuthetha ukuba isibini sikummandla wehla nowezantsi kuma-50. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijonge ezantsi zibonisa ukwehla.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini esi sihambela phezulu. Esi sibini sawela ngaphezulu kwenqanaba le-1.0810 kwaye saphinda saqala ukuya phezulu. Ukunyuka okuphezulu kunokwenzeka njengokuhla kwamaxabiso ngaphezulu komndilili wokuhamba. Ngeli xesha, ngoJulayi 16 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini siya kunyuka siye kwinqanaba le-2.618 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-1.0958.
Iibini zingaphezulu kwe-70% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla phezulu zibonisa uptrend.
I-EUR / CHF iphinde yabuya ngamandla. Isibini semali sikhuphukile saza safikelela kwi-1.08536 ephezulu. Umfutho wokuqhubela phambili onokubakho unokunyuka uye kumaqondo aphezulu angaphambili. Ngokwesixhobo seFibonacci, i-EUR / CHF iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.618 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-1.0958.
I-EUR / CHF ifikelela kuMmandla oThengisiweyo njengoko abaThengi kulindeleke ukuba bavele
YeEUR / CHF Isibini sihamba phantsi. Isibini semali sikufutshane nokudinwa kwe-bearish njengoko yawela kwinqanaba le-1.0826. Imakethi isondela kumgangatho ophantsi ongaphambili kwinqanaba le-1.0790. Okwangoku, ngo-Matshi 16 ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukuphinda kubuyiselwe endaweni kubonisa ukuba isibini siza kuwela kwinqanaba 2.618 ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba le-1.0828. Ukusuka kwintengo yamaxabiso, intengiso ifikelele kwi-2.618 yokwandiswa kweFibonacci. Ixabiso liye lawa nakwiindawo ezithengiswayo kwiimarike.
I-EUR / CHF-itshathi yeDaiy
Isibini semali sikwinqanaba lama-31 leSalathiso soMbane oMandla aMandla ixesha eli-14. Oku kuthetha ukuba isibini sifikelele kwingingqi ethe yathengiswa ngaphezulu. Uxinzelelo lwangoku lokuthengisa kunokwenzeka ukuba lwehle njengoko imakethi ifikelela kwindawo ethe kratya. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijonge ezantsi zibonisa ukwehla.
I-EUR / CHF yeXesha eliPhakathi leTrend: Bearish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini sihamba phantsi. Iimarike ngoku ziphinda ziphinde zibuyele kwinqanaba eliphantsi kwinqanaba le-1.0825 ukuze liphule ngaphantsi kwalo. Okwangoku, nge-8 kaJulayi ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini siza kuwa kwinqanaba le-1.272 ukongezwa kweFibonacci okanye inqanaba le-1.0800 kwaye lijike umva.
Isibini singaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba intengiso ikwi-bearish umfutho. Isibini semali siwele kummandla ogqithisileyo wentengiso. Abathengi kulindeleke ukuba bavele kwindawo ethe kratya.
Isibini semali sifikelele kwi-bearish. Uxinzelelo lokuthengisa kunokwenzeka ukuba lwehle njengoko intengiso ifikelela kummandla ogqithileyo. Ngokwesixhobo seFibonacci, i-EUR / CHF iwele kwinqanaba le-1.272 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-1.0800 kunye nokubuyela umva.
I-EUR / CHF iyashukuma kodwa iinzame zokwenza ulungiso ngokuchasene neDowntrend enkulu
YeEUR / CHF Isibini sihamba phantsi. Esi sibini siwele kwinqanaba eliphantsi kwinqanaba le-1.0960. Imakethi iwele ezantsi ngokwaphula ezantsi. Intshukumo yangoku ye-bearish kulindeleke ukuba yaphule i-1.0880 yangaphambili. Okwangoku, ngo-Matshi 16 ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini siya kuwela kwinqanaba le-2.618 Fibonacci retracement okanye kwinqanaba le-1.0828.
Isibini semali sikwinqanaba lama-47 le-Index ye-Relative Strength period 14. Oku kuthetha ukuba isibini sikummandla wehla nowezantsi kuma-50. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijonge ezantsi zibonisa ukwehla.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini sasikwangoko kuhambo oluboshwe kwinqanaba elingaphantsi kwenqanaba le-1.0970. I-downtrend iqala kwakhona emva kokwaliwa kwinqanaba le-1.0970. Imakethi iyehla emva kokuzama kwakhona indawo yokumelana. Ixabiso le-EUR / CHF liphule ngaphantsi kwemilinganiselo ehambayo eya kukhawulezisa uxinzelelo lokuthengisa.
Itshati ye-EUR / CHF -4 yeYure
Iibini zingaphezulu kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba intengiso ikwi-bearish umfutho. Umndilili oshukumayo uthambekele ezantsi obonisa ukwehla.
Isibini semali sihamba phantsi. I-downtrend yenza ukuphakama okuphantsi okuya kubangela ukunyuka kwezantsi. Ngokwesixhobo seFibonacci, i-EUR / CHF iya kuwela kwinqanaba le-2.0 Fibonacci retracement okanye kwinqanaba le-1.0872.
Ukuhla kwe-EUR / CHF, kwenza iiNqanaba eziPhantsi kunye neeLow ezisezantsi, iNqanaba leThagethi 1.0827
Amanqanaba enkxaso ephambili: 1.0600, 1.0500, 1.0400
YeEUR / CHF Isibini sihamba phantsi. Ixabiso lemali liqhubekile nokwenza uthotho lwezinto eziphantsi nezisezantsi. Iibini zenza umgangatho ophantsi kwinqanaba le-1.0961. Ukwenqatshwa kwinqanaba eliphezulu kutshanje kuya kubonisa ukuqala kwakhona kwe-downtrend. Okwangoku, ngo-Epreli 12 downtrend; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukuphinda kubuyiselwe endaweni kubonisa ukuba isibini siza kuwela kwinqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci kwinqanaba okanye kwinqanaba le-2.0.
Iibini zikwinqanaba lama-55 leNdawo yamaXabiso aMandla aNxulumene naMandla isixa se-14. Oku kuthetha ukuba isibini sikummandla ophakamileyo kunye nangaphezulu komgangatho ophakathi 50. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijonge ezantsi zibonisa ukudodobala.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini siyawa. Isibini semali siboshwe kumgangatho ongezantsi kwenqanaba le-1.0970. Imakethi iyehla emva kokuzama kwakhona indawo yokuchasana. Ixabiso le-EUR / CHF liphule ngaphantsi kwemilinganiselo ehambayo eya kukhawulezisa uxinzelelo lokuthengisa.
I-EUR / USD--4 Itshathi yeYure
Isibini singaphantsi kwenqanaba lama-40% ye-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba intengiso ikwi-bearish umfutho. Umndilili oshukumayo uthambekele ezantsi obonisa ukwehla.
Isibini se-EUR / CHF sisezantsi. I-downtrend yenza ukuphakama okuphantsi okuya kubangela ukuhamba phantsi. Ngokwesixhobo seFibonacci, i-EUR / CHF iya kuwela kwinqanaba lokubuyiselwa endaweni ye-Fibonacci okanye kwinqanaba le-2.0.
I-EUR / CHF ibuye ngaphezulu kwenqanaba le-1.0890, iphinde iqhubeke ngokuTrending
YeEUR / CHF Isibini sihamba ezantsi ukusukela ngoMatshi. Ixabiso lemali lalisenza uthotho lwezinto eziphantsi nezisezantsi. Ixabiso lilungisa phezulu ukuya kufikelela kumanqwanqwa angaphambili. Ukuba amaxabiso ajongene nokwaliwa kwindawo ephezulu yamva nje, ukwehla kuya kuphinda kuqalise. Kwelinye icala, ukuba amaxabiso ayaphula umgca wokumelana nomjelo ohla kwaye uvala ngaphezulu kwawo, uptrend uya kuphinda uqalise.
Isibini sikwinqanaba lama-54 leNdawo yamaQinisekiso aMandla aNxulumene nawo. Oku kuthetha ukuba isibini sikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgangatho osembindini wama-14. I-EUR / CHF isondela kwingingqi ethe kratya kwintengiso. I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zijonge ezantsi zibonisa ukwehla.
Kwitshathi yemihla ngemihla, isibini siyawa. Okwangoku, ngo-Epreli 12 downtrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukuphinda kubuyiselwe endaweni kubonisa ukuba isibini siya kuwela kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye kwinqanaba elisezantsi le-1.0894. Ukusuka kwintsebenzo yexabiso, isibini siphinde saphinda ulwandiso lweFibonacci kwaye saphinda saqala ukuya phezulu.
Umndilili oshukumayo uthambekele ezantsi obonisa ukwehla. Isibini singaphezulu kwama-75% kuluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu.
Isibini se-EUR / CHF sisezantsi. Ukudodobala kuya kuqhubeka ukuba ngaba babini bajongene nokwaliwa kwindawo ephezulu yamva nje. Ukusuka kwintsebenzo yexabiso, imarike ibuyela umva kwakhona ukuze iqhubeke kwakhona nokunyusa phezulu.
I-EUR / CHF yeFace Faces Rejection kwinqanaba le-1.0910, eDowntrend ngokunokwenzeka
YeEUR / CHF Isibini sihamba ezantsi ukusukela ngoMatshi. Ngo-Epreli, isibini semali saqhekeza ngaphantsi kwe-avareji ehambayo njengoko uxinzelelo lokuthengisa luqala kwakhona. Ngomhla wamashumi amathandathu kwinyanga yoKwindla, ikhandlela elibuyise umzimba lavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwakhona kwe-Fibonacci ngama-16%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-EUR / CHF inokuthi iwele kwinqanaba le-38.2 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-2.618.
Iibini zikwinqanaba lama-37 le-Index ye-Relative Strength period 14. Oku kuthetha ukuba isibini sikwindawo ye-downtrend kwaye singaphantsi kwe-50line. I-EUR / CHF isondela kwingingqi ethe kratya kwintengiso. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijonge ezantsi zibonisa ukwehla.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini siyawa. Isibini se-EUR / CHF silungiswe ngaphezulu kwaye saphinda savavanywa kwinqanaba 1.1000. Oku kubonisa ukuqala kwakhona. Okwangoku, nge-23 kaMeyi ezantsi; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukuphinda kubuyiselwe endaweni kubonisa ukuba isibini siya kuwela kwinqanaba le-2.0 Fibonacci extensions okanye kwinqanaba elisezantsi le-1.0844.
Umndilili oshukumayo uthambekele ezantsi obonisa ukwehla. Isibini singaphantsi kwenqanaba lama-40% ye-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba intengiso ikwi-bearish umfutho.
Isibini se-EUR / CHF sisezantsi. NgoJanuwari 15, isibini semali salungisa senyuka saya kwinqanaba le-1.0905 kodwa sachaswa. Imakethi inokuthi ifikelele kwinqanaba le-2.0 Fibonacci okanye inqanaba le-1.0844.
I-EUR / CHF ifikelela kuMmandla oThengisiweyo, iiBreak ezingezantsi kwenqanaba le-1.0897
YeEUR / CHF Isibini sihamba ezantsi ukusukela ngoMatshi. Iibini ziyawa emva kokwaliwa kwinqanaba le-1.1150. Namhlanje, intengiso yenqabile kwinqanaba eliphantsi le-1.0901. Ukuqhubeka kwecala elisezantsi kunokwenzeka. Ngomhla we-30 kuMeyi, abathengi baphinde bathatha inqanaba le-1.100 elibangela ukuba isibini siqhubeke nokuhla.
I-EUR / CHF ikwinqanaba lama-36 le-Index ye-Relative Strength period 14. Kuthetha ukuba isibini sikwindawo ye-downtrend kwaye singaphantsi kwe-50line. I-EUR / CHF isondela kwingingqi ethe kratya kwintengiso. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijonge ezantsi zibonisa ukwehla.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini sisezantsi. Amanqanaba ahambayo enze i-bearish crossover. Iintsuku ezingama-21 ze-SMA zinqumleza ngaphantsi kweentsuku ezingama-50 ze-SMA kwicala eliphantsi. Okwangoku, nge-1 kaJuni ezantsi; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini siza kuwa kwinqanaba le-2.0 Fibonacci extensions okanye isezantsi i-1.0897.
Umndilili oshukumayo uthambekele ezantsi obonisa ukwehla. Intengiso ikwaphantsi kwe-20% yoluhlu lwemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini siwele kummandla ogqithileyo.
Isibini se-EUR / CHF sisezantsi. Imakethi yehle kwi-2.0 Fibonacci extension okanye kwinqanaba le-1.0897. Isibini se-EUR / CHF sinako
I-EUR / CHF ibuye ibuye inqanaba le-1.1100, isayine iDowntrend
I sibini Ukuwa emva kokwaliwa kwinqanaba le-1.1100. Ixabiso lilungiswe phezulu ukuya kwinqanaba lokuzama kwakhona i-1.1100 ngaphambi kokusa uphawu lokuhla. Ngeli xesha, nge-16 kaMatshi idowntrend, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci ye-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-EUR / CHF inokuthi ifikelele kwi-2.618 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-1.0825.
I-EUR / CHF ikwinqanaba lama-47 le-Index ye-Relative Strength period 14. Kuthetha ukuba esi sibini sikummandla we-downtrend kwaye singaphantsi komgangatho osembindini wama-50. .
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini sisezantsi. Esi sibini salungisa ngaphezulu ngaphambi kokuba sibuyele ezantsi. Okwangoku, nge-22 kaMeyi ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukuphinda kubuyiselwe endaweni kubonisa ukuba isibini siya kuwela kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci extensions okanye isezantsi se-1.0842.
Umndilili oshukumayo uthambekele ezantsi obonisa ukwehla. Intengiso ikwaphantsi kwe-40% yoluhlu lwemihla ngemihla. Ibonisa ukuba ikwi-bearish umfutho. Uxinzelelo lokuthengisa kunokwenzeka ukuba luqhubeke.
Isibini se-EUR / CHF sisezantsi. Ixabiso liphule ngaphantsi kwemilinganiselo yokuhamba. Oku kuphakamisa ukuba isibini sikwindawo ehamba phambili ye-bearish kwaye sinokuwa.